Iflethi entle embindini weVigo.Vialia. - I-Airbnb
Iflethi entle embindini weVigo.Vialia.
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguCris
Iflethi okanye indlu ekwicomplex eyi-105 mº embindini weVigo, ngaphezu kwemizuzu eyi-10 yesitrato iPrincipe. I-wifi nesidlo sakusasa ziqukiwe.
Iflethi inekhitshi elinento yonke kuquka izixhobo zombane, izinto zokupheka, izinto zokupheka, kunye ne-ionizer yamanzi ukuze abantu bazive besekhaya. Inendawo yokuhlala engaphakathi enomatshini wokuhlamba impahla neekhethini zokomisa iimpahla.
Igumbi lokuhlala linamagumbi aliqela kwaye libheke i-estuary enkulu ye-Ician, kunye ne-TV equkiweyo kunye nokufikelela kwintente enkulu egqunyiweyo.
Umzila udibanisa amagumbi okulala amathathu, axhotyiswe ngeTV namagumbi okuhlambela amabini.
4.78 · Izimvo eziyi-77
Le ngingqi ikwisakhiwo esinezakhiwo zale mihla, esineebhasi neendlela ezahlukeneyo zothutho. Unxweme lwasePaseo de Alfonso lukufutshane kakhulu nendawo ekuyo iPaseo de Alfonso, eneendawo ezintle onokuzibona!
Umbuki zindwendwe ngu- Cris
Ngokuqhelekileyo, njengendawo yokutyela isidlo sakusasa namanzi acocekileyo ayafumaneka ngalo lonke ixesha.